Saddex taleefan oo Redmi ah ayaa ka dhammaaday cusbooneysiinta Android Pie | Androidsis
Eder Ferreno | | Noocyada Android, Xiaomi
Qeyb weyn oo ka mid ah noocyada ayaa hadda ku cusbooneysiinaya taleefannadooda Android Pie. In kasta oo ay waliba tahay markii la shaaciyey haddii ay jiraan taleefannno aan aakhirka marin u heli doonin cusboonaysiinta la sheegay. Tani waa kiiska Xiaomi, oo ku dhawaaqay magacyada telefoonada qaarkood oo aan cusbooneysiin doonin. Nooca Shiinaha ayaa nooga tagaya seddex magac, oo dhammaantood ka kala socda Redmi.
Waa ogeysiis rasmi ah oo ku saabsan nooca Shiinaha, iyada oo loo marayo degelkeeda rasmiga ah. Dhexdeeda, Xiaomi waxay xaqiijineysaa magacyada seddex taleefan oo casri ah oo ku dhex jira Redmi waxaa looga tagi doonaa iyaga oo aan marin u helin Android Pie. Warka xun ee isticmaalayaasha midkoodna moodelladan.
Xaaladdan oo kale waxay kaloo ku saabsan tahay saddex taleefannada casriga ah oo ku dhex jira aagga Redmi ayaa si rasmi ah loo bilaabay sanadkii hore. Markaa waa go'aan shaki la'aan abuuri kara xoogaa khilaaf ah oo ka dhex dhaca adeegsadayaasha nooc kasta oo ka mid ah moodooyinka Xiaomi. Laakiin way ka dhamaadeen Android Pie.
Kuwa ay doorteen sumadda Shiinaha kiiskan ayaa ahaa Redmi 6, Redmi 6A iyo Redmi S2 (sidoo kale loo yaqaan Redmi Y2). Midkoodna moodelladani ma heli doonaan cusbooneysiinta. In kasta oo labada hore ay yihiin wax la fahmi karo, maxaa yeelay iyagu waa kuwa ugu hooseeya, kan saddexaadna xoogaa muran ayaa ka jira oo iyagu ma ayan billaabin.
Shaki la'aan, warar xun oo iyaga u gaar ah, kuwaas oo noqonaya iyaga oo aan marin u helin Android Pie taleefannadooda. Markii hore, Xiaomi wuxuu lahaa qorshayaal taleefannadan helitaanka cusboonaysiinta dabayaaqada sanadkaan, laakiin waxaa jiray isbadal qorshayaal. Marka dhammaantood waa inay ku sii jiraan Android 8.1 Oreo.
In kasta oo ay shirkaddu xaqiijineyso inay sameyn doonaan sii wad sii deynta wararka MIUI taleefannadan, sidaa darteed ma aysan waayin taageeradii sida kuwa kale ee sumadda. Laakiin ma heli doonaan fursad ay ku helaan Android Pie wakhti kasta. Maxaad u maleyneysaa go'aankan Xiaomi?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi waxay xaqiijineysaa Redmi cusub oo aan heli doonin cusbooneysiinta Android Pie
Instagram ayaa ka saari karta waxyaabaha ay jecel yihiin sawirrada